Dibadbax Maanta Muqdisho ka Dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Dibadbax Maanta Muqdisho ka Dhacay
Muqdisho (Keydmedia) - Dibad bax lagu taageerayo go’aankii dhowaan uu Madaxwaynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya uu dib ugu soo celiyay hanti ay lahayeen Saraakiil ka tirsanaa Ciidamada xooga dalka ayaa ka dhacay maanta Muqdisho, inkasto ay Ciidamada Nabadsugidda ay isku dayeen inay ho istaagaan banaan baxaasi.
Dadka dibad baxyada dhigaayay ayaa waxaa ay isugu soo baxeen socodna ay kusoo mareen inta udhaxaysa Taalooyinka SYL iyo Xaawo Taako kuwaas oo ku dhawaaqayay Ereyo ay kamid ahaayeen erayo ay ku amanayeen Madaxweynaha TFG-da Shariif.
Sidoo kale waxaa ka qayb ahaa Banaanbaxa Ciidamada Bambayda oo dadka shacabka u gula qayb qaadanaayay dhanka musiga iyo heesaha Qaranka.
Ciidamada Nabadsuggida Dowladda ayaa iyagu isku dayay inay hor istaagaan banaan baxa maanta ka dhacay Muqdisho, inkastoo ay markii dmabe iska dhaafeen.
Madaxweyn Shariif ayaa dhowaan waxaa uu soo saaray wareegto uu ku sheegayo in lasoo celiyo hanti ay kamid ahayd dhul, guryo iyo deegaano kale oo ay lahayeen saddex sarkaal oo katirsanaa Dowladii hore ee Soomaaliya oo Dowladii wagaas ay ka qaaday hantidaas.